IMIBUZO -E-FOSHAN KWEZINTLOKO ZEFANITSHALA CO., LTD
Awuyifumani impendulo oyifunayo? Sithumele umyalezo ngokusebenzisa iphepha lethu lokunxibelelana nathi.
Uphi inkampani yakho? Ngaba ungandixelela ulwazi oluthe kratya malunga nenkampani yakho?
Inkampani yethu kunye nomzi-mveliso zikwiNombolo 18 Qiaogao Road, Xiqiao Idolophu, Isithili saseNanhai, eFoshan, eGuangdong, China.
Ikhompiyutha yefenitshala yeGreentone inikezelwe kwimveliso kunye nokuthumela ngaphandle kwefanitshala yeofisi kangangeminyaka eli-9, uninzi lwabathengi bethu baseYurophu naseMelika.
Kutheni kungekho maxabiso aboniswe kwiwebhusayithi yakho?
Amaxabiso ethu anokutshintsha ngokuxhomekeke kubonelelo kunye nezinye izinto zentengiso. Indawo yakwaGootone (www.goodtonechair.com) yiwebhusayithi yomenzi eyilelwe ukubonisa imveliso yethu.Ukuba ufuna ukufumana ulwazi lwamaxabiso, ungathandabuzi ukunxibelelana ne-imeyile yethu.
Ngaba unikezela ngenkonzo ye-ODM?
Ukuba ufuna sivelise izitulo ngoyilo osinike lona, ​​nceda unxibelelane nathi ukuze siqhubeke nengxoxo. Sinokubonelela ngezimvo ezithile ukuphucula uyilo losihlalo.
Liliphi ixesha lewaranti ezitulweni?
Sibonelela kwiminyaka emi-5 iwaranti. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke.
Unokwenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki:
Ngokuqinisekileyo sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iZatifikethi zoHlahlelo / ukuVumelana; I-inshurensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu okuthumela ngaphandle apho kufuneka khona.
Uthini ubungakanani beodolo yakho?
Sifuna yonke iodolo yamanye amazwe ukuba ibe nobuncinci be-odolo obuncinci obuqhubekayo. Ukuba ujonga ukuthengisa kwakhona kodwa ngamanani amancinci kakhulu, sicebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yethu Ukuba unomdla ngokukodwa kwenye yeemveliso zethu, nceda unxibelelane nathi kwangethuba, kwaye siza kukubonisa iisampulu zethu kunye nemveliso.
Nceda uthumele isicelo sakho sesampulu kwifom yokubuza.
Kuya kuthatha ixesha elingakanani kum ukufumana usihlalo weofisi emva kokufaka iodolo?
UFUNA UKUSEKA UBUDLELWANE BOSHISHINO NATHI?